झरी नलागेपनि भोलि र पर्सी वर्षाको सम्भावना, जमीन गलिसकेकाले पहिरोको जोखिम
काठमाडौँ-अबको केही दिन लगातारको झरी भने नहुने भएको छ। यद्यपि अहिले मुलुकभर नै मौसम बदली छ। छोटो समयका लागि खण्डखण्डमा भने मध्यम र भारी वर्षा हुने मौसमविद्को भनाइ छ। यसबीचमा नेपालको पूर्वी तराई क्षेत्र र पश्चिम क्षेत्रमा मनसुन बढी सक्रिय हुनेछ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले अहिले पनि मुलुकभर नै मौसम बदली रहेको र ठाउँठाउँमा वर्षा भइरहेको जनाएको छ। तर बेलाबेलामा सामान्यदेखि चर्को घाम पनि लाग्छ।
अबको तीन दिन विगतमा जस्तो लगातारको झरी भने नहुने विभागका मौसमविद् मीनकुमार अर्यालले जानकारी दिए।
उनले अहिले मनसुन न्यूनचापीय रेखा नेपालबाट दक्षिण सरे पनि नेपाल नजिक नै रहेको बताए। भोलि आइतबार र पर्सी सोमबार अझै केही नजिक आउने हुँदा तराईका क्षेत्रमा वर्षा थपिने सम्भावना छ। देशका अधिकांश क्षेत्रमा बेलाबेलामा घाम लाग्ने र मध्यमखालको वर्षा हुने अर्यालले जानकारी दिए।
प्रदेश १, २, ५, गण्डकी, सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक दुई स्थानमा भारी वर्षको सम्भावना कायमै छ। आजभन्दा भोलि र पर्सी भने थोरै बढी वर्षा हुने भए पनि लगातारको झरी नहुने अर्यालले बताए।
यसअघि असार २५ देखि ३० गते र साउन ४ देखि ६ गतेसम्म लगातार वर्षा भएको थियो। उक्त वर्षापछि आएको बाढी, पहिरो र डुवानले मुलुकका अधिकाँश क्षेत्र प्रभावित बनाएको थियो।
यस्तै साउनको १२ देखि १६ सम्म पश्चिम क्षेत्रमा बढी वर्षा भयो, तर विगतको जस्तो लगातार वर्षा हुन पाएन। तैपनि केही स्थानमा पहिरो खसेर मानिसको मृत्यु भएको छ भने केही हराइरहेका छन्। उद्धारको काम जारी छ। अबको तीन दिन भने त्योभन्दा केही कम वर्षा हुने जनाइएको छ। केही ठाउँमा भारी वर्षा हुने अनुमान छ।
“पहिलेको जस्तो लगातार रुपमा वर्षा हुने देखिँदैन, खण्डखण्डमा वर्षा हुन्छ”, अर्यालले भने-“छोटो समयमा केही ठाउँमा भारी वर्षाको सम्भावना पनि छ।”
आज शनिबारको तुलनामा भोलि आइतबार र पर्सी सोमबार तराईको क्षेत्रका एक/दुई स्थानमा बढी वर्षा हुने जनाइएको छ।
विगत १० वर्षको तुलनामा यस वर्ष पहिराले धेरै मानिसको ज्यान लिएको छ। भेलपहिरो खसेर बढी क्षति पुर्‍याएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले जानकारी दिए।
प्राप्त विवरणअनुसार गत वैशाखयता पहिरोबाट १५६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने ४५ जना बेपत्ता छन्। बाढीबाट छ जनाको मृत्यु १३ जना बेपत्ता भएका र चट्याङबाट ४७ जनाले ज्यान गुमाएका छन्।
बाढी, पहिरो र चट्याङबाट वैशाखयता २०९ जनाको मृत्यु, ५८ बेपत्ता र २९९ जना घाइते रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। मनसुन सक्रिय भएको दिन जेठ ३० पछि डेढ महिनाको अवधिमा पहिरोमा परेर मात्रै १५४ को मृत्यु भएको छ।
प्रकाशित मिति: शनिवार, श्रावण १७, २०७७, ०४:००:१२
कोरोना संक्रमणको जोखिम झेल्दै रुपन्देहीमा राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि तथ्यांक संकलन शुरु
प्रदेश ५ का ९ जिल्ला रेडजोनमै, रेडजोनमा रहेका जिल्लामा लागू हुनेछ सवारीमा जोरबिजोर प्रणाली ?
रुपन्देहीमा इन्सपेक्टरसहित ४० प्रहरी कारबाहीमा, १ सयजना पुरस्कृत, ११८ जनाको बढुवा
बुटवल-कपिलवस्तुमा ४ जना बैंकका कर्मचारीसहित थप ८ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ। सदरमुकाम तौलिहवामा ३ वटा बैंकका ४ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको हो। पुरा पढ्नुहोस्
लुम्बिनीका भिक्षुहरु वर्षावासमा, किन बस्छन् भिक्षुहरु वर्षावासमा ?
बुधवार, श्रावण २१, २०७७ निरू गौतम 'निरा'
रुपन्देही–बौद्ध धर्मावलम्बीको पर्व वर्षावास शुरु भएसँगै लुम्बिनीमा भिक्षुहरु वर्षावासमा बसेका छन्। प्रत्येक असार महिनाको पूर्णिमादेखि असोज पूर्णिमा तीन महिनासम्म थेरवाद भिक्षुहरू वर्षावास बस्ने परम्परा भएपनि यो वर्ष भने मलमासका कारण वर्षावास एक महिना पछि सरेको हो। पुरा पढ्नुहोस्